ယရှေုသညျလောက် | Apg29
811 online! | Sidvisningar idag: 243 625 | Igår: 266 491 |
Meadow ဟာဒီဇင်ဘာလ 11, 2016
တခါတရံမှသာသညျယရှေုကိုခံယူဖို့လုံလောက်တဲ့မဟုတ်ကြောင်းပြောပါသောသူတို့အားရှိပါတယ်။ ကမလောက်မယ့်လျှင်မူကား, ကျွန်တော်တို့ကိုကယျတငျနိုငျသညျဟုဘာမှမရှိဘူး။ ငါ့အဆွေခင်ပွန်း: သောကမျြးစာအမိန့်သည်ထိုသို့ယရှေုသညျခံယူဖို့လုံလောက်တဲ့ပါ!
"ဒါပေမဲ့ [ယေရှု] ကိုယ်တော်ကိုလက်ခံရရှိအဖြစ်များစွာသောသူတို့အားသူကသူ့နာမကိုအပေါ်ယုံကြည်သောသူတို့အဖို့, ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏။ " - ယောဟန် 1:12
အများအပြားမှားသောအယူများယနေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ထဲမှတစ်ဦးကသညျယရှေုကိုခံယူဖို့လုံလောက်တဲ့မဟုတ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ သူတို့ကပိုပြီးအရာတစ်ခုခုရှိရပါမည်ကြောင်းငြင်းခုန်။ ဥပမာအားဖြင့်, အကျင့်ကိုသို့မဟုတ်အခြားအမှုအရာ။ သို့သော်ဤမကယ်တင်နိုင်ပါ။ ဒါဟာကယ်တင်သောသူသာသညျယရှေုဖြစ်ပါတယ်။ ယရှေုသညျထိုကြောင့်လုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ဦးကသငျသညျယရှေုသညျယရှေုသညျထကျပိုအရာတစ်ခုခုကို + အခြားအရာတစ်ခုခုရှိရမည်ကပြောပါတယ်သောအခါ, သငျသညျယရှေုသညျနှင့်အတူလုံလောက်တဲ့သည်ကတစ်ယူဖောက်ပြန်ကြောင်းချက်ချင်းသိ!
ကမျြးစာကကျနော်တို့သူ့ရှေ့မှာအဘယ်သူမျှမကအခြားတပါးသောဘုရားတို့ကိုရကြလိမ့်မည်ကပြောပါတယ်။ အလားတူပင်သငျသညျယရှေုနှငျ့အတူအခြားမည်သည့်ယောက်ျားရှိသည်မဟုတ်သငျ့သညျ။ ယေရှုအားကလောက်!
"သင်သည်ငါ့ရှေ့မှာအဘယ်သူမျှမကအခြားတပါးသောဘုရားတို့ကိုရကြလိမ့်မည်။ " -2ထှကျမွောကျရာ 20: 3
သို့သော်ထိုသို့ယရှေုသညျနှငျ့အတူရှိ၏။ သငျသညျကိုယျတျောကိုလက်ခံရရှိပြီလော သင်သည်သင်၏ဟုတ်ကဲ့ကလညျးရှိပါသလား?
ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါလိမ့်မယ်: မည်သူမဆိုသင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်, ထို့နောက်သူကကာကွယ်, လုံလောက်တဲ့ယရှေုသညျမရှိသောသင်တို့၌ပြောနေလျှင်။ သူဟာမာရ်နတ်ကိစ္စရပ်များကိုတတ်၏။ အဆိုပါမေးခွန်းသငျသညျထာဝရအငရဲမှပျောက်ဆုံးသွားခံရဖို့အတှကျသူအရာအားလုံးကိုတတ်လာသောအခါသူကပင်မိမိကိုမိမိသိမ်းဆည်းဖြစ်စေပါ! ယရှေုသညျကမျြးစာတှငျကပြောပါတယ်ဘာလဲ
"သူကလည်းသူတို့ကိုဥပမာ ပေး. တစ်ဦးကမျက်စိကန်းသောကောင်းစွာလူကန်းကိုလမ်းပြနိုင်မည်မဟုတ်ပါတှငျးထဲမှာနှစ်ဦးစလုံးမကျပါသလား?" - လုကာ 6:39 မြေတွင်းထဲသို့မိမိကျရန်သင့်အားဖြစ်ပေါ်စေသည်သူတယောက်။ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းသငျသညျယရှေုကိုကိုလက်ခံသည်။ ဘာမှရှိပါတယ်။ ယေရှုအားကလောက်! ငါသည်ခပ်သိမ်းသောသညျယရှေုကိုလက်ခံရရှိအကြောင်း Apg29 အပေါ် 32 ကျမ်းစာရင်းပြီ သညျယရှေုကိုလက်ခံရရှိရန်အကြောင်း 32 ကျမ်းစာ၌ပါ သညျယရှေုလောက်!
PS ။ ခရစ္စမတ်ဆုလက်ဆောင်စိတ်ကူးများ! DS ။
Det är rätt så konstigt att det finns så kallade kristna som går emot att man behöver ta emot Jesus för att bli frälst.
Sådana personer som har den villoläran har ingenting i dessa kommentarsfält att göra.
Jag tillåter ingen som besöker Apg29 att hindra människor att ta emot Jesus så att de inte kan bli frälsta.
Svara - - 11/12-16 15:25 -
Vecka 42, torsdag 19 oktober 2017 kl. 23:41